ထားဝယ်တွင် ပထမနှစ်ကျောင်းသူကို ဖမ်း၍ အဒေါ်ပါ လိုက်သွား - Myanmar Pressphoto Agency
arrested MPA Myanmar News Politics Student Women
Women November 13, 2021 ·0Comment
တနင်္သာရီတိုင်း၊ ထားဝယ်တက္ကသိုလ်မှ ပထမနှစ်ကျောင်းသူ မဆုမြတ်မွန်ကို အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့သဖြင့် အဒေါ်ဖြစ်သူပါ လိုက်ပါဖမ်းဆီးခံခဲ့ကြောင်း ဒေသခံများနှင့် ထားဝယ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂထံမှ သိရသည်။
ဆန္ဒပြပွဲများတွင် ပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ မဆုမြတ်မွန်ကို ထားဝယ်ရှိနေအိမ်တွင် နိုဝင်ဘာ၁၂ရက်နေ့ညပိုင်းက ဖမ်းဆီးခဲ့သဖြင့် အဒေါ်ဖြစ်သူ မအိလှိုင်ကပါ လိုက်ပါဖမ်းဆီးဖမ်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
“လာဖမ်းတာကသူ့ကိုလာဖမ်းတာသူ့အဒေါ်ကအုပ်ထိန်းသူတစ်ယောက်အနေနဲ့စိတ်မချလို့လိုက်သွားတယ်ဗျ။ဘာလို့လာဖမ်းတာလည်းဆိုတော့တစ်ရက်နှစ်ရက်လောက်ကဖမ်းခံရတဲ့ရဲရဲဆိုတဲ့တစ်ယောက်ကသပိတ်ထွက်တဲ့သူတွေကိုလိုက်ပြရင်းဖမ်းတဲ့ထဲပါတာပေါ့” ထားဝယ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက ဆိုသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ၁၀ရက်ခန့် ဖမ်းဆီးခြင်းခံခဲ့ရသည့် ရဲရဲဆိုသူ တစ်ဦက သတင်းပေးခြင်းကြောင့် မဆုမြတ်မွန်အပါအဝင် ၆ ဦးထက်မနည်း နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့ ညပိုင်းက အကြမ်းဖက်စစ်တပ်၏ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ဖမ်းဆီးခံရာတွင် CDMပြုလုပ်ထားသူ အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို မတွေ့သဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်အရွယ် မောင်ဖြစ်သူ ၂ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့မှုလည်း ပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။
“မနေ့ညကကျနော် သိသလောက်ဆိုရင် ၆ ယောက်လောက် ပါသွားတာ သိရတယ်။ ပေါ်ကျွန်းရပ်ကွက်ကဆိုရင် အစ်မကိုလာရှာတာ အစ်မ မရှိလို့ ၁၆နှစ်နှင့်၁၄နှစ်အရွယ် ကလေး ၂ ယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်။” ဟု ကျောင်းသားသမဂ္ဂမှ တာဝန်ရှိသူက ဆိုသည်။
နိုဝင်ဘာ၈ရက်နေ့ကလည်း ထားဝယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဒုတိယဥက္ကဌ၏ မိခင်ဖြစ်သူနှင့် ညီမဖြစ်သူတို့ကို စစ်တပ်က ဖမ်းဆီးခဲ့သေးသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်အတွင်းကလည်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်သည် ထားဝယ်ခရိုင်သပိတ်ကော်မတီ ခေါင်းဆောင်များ၏ မိသားစုဝင်များကို ဖမ်းဆီးခြင်း၊ နေအိမ်များကို မီးရှို့ခြင်းများကိုလည်း အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
#ထားဝယ်တက္ကသိုလ် #ကျောင်းသူဖမ်းဆီးခြင်းခံရ #MPA #အမျိုးသမီ
Frist-Year Female University Student Arrested and her Aunt Followed
A first-year female student from Dawei University of Taninthartyi region, Ma Su Myat Mon, was arrested by the terrorist military and her aunt followed along, according to locals and Dawei University Student Union.
When Ma Su Myat Mon was arrested on November 12 evening at her home accusing her of participating in protests, her aunt, Ma Ei Ei Hlaing, also went along.
“Only she was the one arrested, but her aunt followed along because she wasn’t assured as her guardian.
When asked why she was arrested, there is one by the name of Ye Ye who was arrested one or two days ago and people were arrested through her direction”, an official from Dawei University Student Union said.
Ma Su Myat Mon isastudent from the department of oriental studies of Dawei University, she was arrested yesterday evening at her residence at Yatkut market in Htein Haung ward.
Because of the informing of Ye Ye who was arrested on November 10, six including Ma Su Myat Mon were arrested on November 12 evening by the terrorist military.
In the process of the arrest, two teenage younger brothers ofaCDM-er woman were arrested too because they couldn’t find her.
“As far as I know, six were arrested last night. At Porkyun ward,a16-year-old and 14-year-old boys were taken as they couldn’t find their elder sister”, saidastudent union official.
On November 8 also, mother and younger sister of the Dawei University student union chairman were arrested by the military.
Last week also, the terrorist military arrested family members of Dawei University strike committee leaders and burnt their houses.
#DaweiUniversity #FemaleStudent #Arrested #MPA #Women